Mako 8 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naMako 8:1-38
Jesu anopa vanhu 4 000 zvekudya (1-9)
Vanoti avaratidze chiratidzo (10-13)
Mbiriso yevaFarisi neyaHerodhi (14-21)
Bofu rinoporeswa muBhetisaidha (22-26)
Petro anotaura kuti Jesu ndiye Kristu (27-30)
Jesu anotaura nezverufu rwake (31-33)
Kuva mudzidzi wechokwadi (34-38)
8 Rimwe zuva mumazuva iwayo, pakaungana vanhu vakawanda zvikuru, uye vakanga vasina zvekudya. Saka akashevedza vadzidzi akati kwavari: 2 “Ndiri kusiririswa nevanhu ava,+ nekuti vava nemazuva matatu vaineni asi havana zvekudya.+ 3 Kana ndikavaendesa kumisha yavo vasina kudya, vachaziya munzira; vamwe vavo vanobva kure.” 4 Asi vadzidzi vake vakamupindura kuti: “Munhu angawana kupi chingwa chinokwana vanhu ava vachiguta munzvimbo ino iri kwayo yega?” 5 Akabva avabvunza kuti: “Mune chingwa chakawanda sei?” Ivo vakati: “Zvingwa zvinomwe.”+ 6 Uye akaudza vanhu kuti vagare pasi. Akabva atora zvingwa zvacho zvinomwe, akaonga, akazvimedura, akatanga kuzvipa vadzidzi vake kuti vape vanhu, uye vakavapa.+ 7 Vaivawo nehove diki shomanana, uye akadzikomborera, akavaudza kuti vadzipewo vanhu. 8 Saka vakadya, vakaguta, uye vakaunganidza zvakasara, zvikazadza matengu manomwe.+ 9 Pakanga paine varume vangasvika 4 000. Akabva avati vachienda zvavo. 10 Akabva angokwira muchikepe nevadzidzi vake, vakasvika munharaunda yeDharimanuta.+ 11 VaFarisi vakauya, vakatanga kuita nharo naye, vachiti avaratidze chiratidzo chinobva kudenga, vachida kumuedza.+ 12 Saka akatura mafemo achirwadziwa mumwoyo make uye akati: “Chizvarwa ichi chinotsvagirei chiratidzo?+ Zvechokwadi ndinoti, hapana chiratidzo chichapiwa chizvarwa ichi.”+ 13 Akabva avasiya, akakwirazve muchikepe, akayambuka mhiri. 14 Asi vakakanganwa kutakura chingwa uye vakanga vasina chavaiva nacho muchikepe kunze kwechingwa chimwe chete.+ 15 Uye akavayambira zviri pachena achiti: “Rambai makangwarira; chenjererai mbiriso yevaFarisi neyaHerodhi.”+ 16 Saka vakatanga kuitisana nharo pamusoro pekuti vakanga vasina chingwa. 17 Paakavanzwa akati kwavari: “Nei muri kuitisana nharo nezvekuti hamuna chingwa? Hamusati mava kubata zvazvinoreva uye kunzwisisa here? Mwoyo yenyu ichakagomara pakunzwisisa here? 18 ‘Kunyange muine maziso, hamuoni here; uye kunyange muine nzeve, hamunzwi here?’ Hamuyeuki here 19 kuti pandakamedurira varume 5 000 zvingwa zvishanu,+ makaunganidza zvakasara mukazadza tswanda ngani?” Ivo vakati kwaari: “Takazadza 12.”+ 20 “Pandakamedurira varume 4 000 zvingwa zvinomwe, matengu mangani amakazadza nezvakasara?” Ivo vakati kwaari: “Manomwe.”+ 21 Akabva ati kwavari: “Hamusati mava kunzwisisa here?” 22 Vakazosvika kuBhetisaidha. Uye vanhu vakauya kwaari nemurume aiva bofu, vakamuteterera kuti amubate.+ 23 Uye akabata murume wacho ruoko, akabuda naye kunze kwemusha. Pashure pekusvipira mate pamaziso ake,+ akaisa maoko ake paari, ndokumubvunza kuti: “Pane chauri kuona here?” 24 Murume wacho akasimudza musoro akati: “Ndiri kuona vanhu, asi vari kuita kunge miti iri kufamba-famba.” 25 Akaisazve maoko ake pamaziso emurume wacho, murume wacho akatanga kunyatsoona. Maziso ake akaporeswa, uye akanga ava kunyatsoona zvinhu zvese. 26 Saka akamuti aende kumba, asi akati: “Usapinda mumusha uyu.” 27 Jesu nevadzidzi vake vakasimuka vakananga kumisha yeKesariya Firipi, uye vari munzira akatanga kubvunza vadzidzi vake kuti: “Vanhu vari kuti ndini ani?”+ 28 Vakati kwaari: “Johani Mubhabhatidzi,+ asi vamwe vanoti Eriya,+ vamwewo vachiti, mumwe wevaprofita.” 29 Uye akabvunza ivo vacho kuti: “Ko imi, munoti ndini ani?” Petro akamupindura kuti: “Ndimi Kristu.”+ 30 Akabva avaudza kuti vasatomboudza chero munhu nezvake.+ 31 Uyewo, akatanga kuvadzidzisa kuti Mwanakomana wemunhu anofanira kusangana nematambudziko akawanda, orambwa nevakuru nevatungamiriri vevapristi nevanyori, ourayiwa,+ ozomuka pashure pemazuva matatu.+ 32 Aivaudza mashoko aya pachena. Asi Petro akaenda naye parutivi, akatanga kumutsiura.+ 33 Akabva atendeuka, akatarisa vadzidzi vake, akatsiura Petro achiti: “Siyana neni* Satani! nekuti haufungi zvinofungwa naMwari, asi zvinofungwa nevanhu.”+ 34 Akabva ashevedza vanhu pamwe nevadzidzi vake, akati kwavari: “Kana munhu achida kunditevera, ngaazvirambe, atore danda rake rekutambudzirwa,* arambe achinditevera.+ 35 Nekuti munhu wese anoda kuponesa upenyu hwake* acharasikirwa nahwo, asi munhu wese anorasikirwa neupenyu hwake* nekuda kwangu uye nekuda kwemashoko akanaka achahuchengetedza.+ 36 Ko zvinobatsirei kuti munhu awane nyika yese orasikirwa neupenyu hwake?*+ 37 Munhu angapa chii chaizvo, kuti arege kurasikirwa neupenyu hwake?*+ 38 Nekuti munhu wese anonyara neni nemashoko angu muchizvarwa chino cheupombwe* uye chinotadza, Mwanakomana wemunhu paanouya ari mukubwinya kwaBaba vake aine ngirozi tsvene,+ achanyarawo naye.”+
^ ChiGir., “Enda shure kwangu.”
^ Kana kuti “nemweya wake.”
^ Kana kuti “chisina kutendeka.”